Maxaad ka taqaannaa xulafada gaashaanbuurta NATO? - BBC News Somali
Gaashaanbuurta Nato waxaa la aasaasay 1949-kii iyada oo waddamada isku bahaystay ay ugu dan lahaayeen si ay isaga caabbiyaan isballaarintii Midowga Soofiyeti uu ku hayey waddamada Yurub, iyada oo ay NATO tahay xulafada militari ee ugu awoodda badan caalamka.
Waxaana asal ahaan aasaaska gaashaanbuurta uu salka ku hayaa "ilaalinta xornimada, ilbaxnimada iyo athaarta ma guurtada ee ay dalalka xubinka ka ah ee ku yaalla waqooyiga Atlanta ay wadaagaan.
Waxayna waddamada xubinka ka ah ku heshiiyeen dagaalka hubeysan ee lagu soo qaado waddan ka mid ah ay ka dhigan tahay mid lagu soo qaaday waddamada xubinka ka ah gaashaanbuurta oo dhan.
Gaashaanbuurta Nato waxaa xubna ka ahaa oo lagu aasaasay 12 dal, iyada oo 1952-kii ay xubin ka noqdeen waddamada Greece, Turkiga iyo Galbeedka Jarmalka. Inkasta oo ciidamada ugu badan gaashaanbuurta ay yihiin kuwa Mareykanka.
1995-kii waxay Midowgii Soofiyeti dhistay xulafa ay gaashaan buurtaasi kaga soo horjeeddo oo loo yaqaannay Warsaw, xulafadaasi oo kala tagtay marki uu 1991-kii Midowgii Soofiyeet burburay.
Jamhuuriyadda Czech, Hungary iyo Poland oo horay uga tirsanaa gaashaanbuurtii Warsaw ayaa waxay 1999 xubinnimo ka heleen gaashaanbuurta NATO.
Tallaabbadi xigtay oo ay xulafada qaaddoo ayaa waxay ahayd 2004-tii waddamada Estonia, Lativia iyo Lithunia oo Midowgi Soofiyeeti ka mid ah ilaa uu ka burburo 1991 iyo waddamada Slovakia, Slovenia, Bulgaria iyo Rumania ayaa sida oo kale xubin ka noqday Nato iyada oo xafladda xubinimadooda lagu soo dhaweynayey ay ka dhacday magaalada Washington.
Dalka Montenegro ayaa noqday waddanki ugu dambeeyey oo sanaddi 2017-kii xubin ka noqday Nato.
Haddaba waa sidee qabdhismeedka NATO?
Nato qaabdhismeedkeeda wuxuu ku beegnaa dagaalki labaad ee adduunka inta uusan billaabmin iyada oo gaashaan buurta loo sameeyey si isballaadhinta midowga Soofiyeti ay ka waddo Yurub ay uga hortagaan.
Waxayna gaashaanbuurta marki ugu horreysay ay diyaarisay Ciidama Caalami ah oo qaramada midoobay hoos taga oo howlo nabad ilaalin ka fuliyo Bosnia.
1999-kii waxay xulafadu duqeymo dhinaca cirka ah oo socday 11 usbuuc ka fuliyeen Yugoslavia si ay xoogagga Serb ay uga saaraan Kosovo. Weerarkaasi cirka oo ahaa howl galkii ciidan ee ugu weynaa oo ay Nato fuliso, marki ugu horreysayna waxay howlgeliyeen ciidamo ka hortagga xoogagga dal jira oo la aqoonsan yahay iyaga oo fasax ka helay qaramada midoobay.
Dagaalkaasi marka uu dhamaaday kaddibna waxaa Kosovo ku sii sugnaa ciidamo nabad ilaalin oo gaashaanbuurta ka socda oo ay tiradooda gaareyso 16,000 iyada oo tirada ciidamada 2012 lagu soo koobay 6,000 oo keli ah.
2003-dina Nato waxay howlgalkeedi ciidan ee ka baxsan Yurub ay ka fulisay dalka Afqaanistaan caasimaddiisa Kabul iyada oo awoodda ciidama nabad ilaalin ay ka haysteen qaramada midoobay.
Burburki Midowgi Soofiyeti kaddib maxaa dhacay?
Wixi ka dambeeyey burburki Midowgi Soofiyeti sanadki 1991-kii, Nato waxay qaadday tillaabbooyin ay dib ugu soo nooleyneyso xiriirka ay la leedahay Warsaw gaar ahaanna Ruushka.
1994-kii waxay Nato xulafadi hore ee Warsaw ay u dirtay farriin ah iney iskaashi kooban la yeeshaan oo ay Nato iskala shaqeeyaan barnaamijyada nabadda, iyaga oo u oggolaaday iney xogaha isdhaafsadaan, dhoollatus milataro oo wadajir ahna sameeyaan isla-markaana howlaha nabad ilaalintana iska kaashadaan.
1997-kina waxaa la aasaasay golaha wadajirka ee Nato iyo Ruushka oo Moscow siinaya doorka latalinta arrimaha danaha labada dhinac quseeya. Waxaana Moscow la siiyey cod, oo keenay in mararka qaar la dhageysto fikirkeeda.
Wixi ka dambeeyey weerarki 9/11
Weerarki 11-ka September 2011 lala beegsaday Mareykanka ayaa xulafada Nato u noqday fursad aad muhiim u ah.
Inkasta oo weerarkaasi Mareykanka lagu qaaday wax ka qabashada dhibaatadi ka dhalatay ay Xulafada Nato ka qayb qaadan, haddana xoghayaha guud ee Nato George Robertson wuxuu ku dhawaaqay in lagu dhawaaqo qodobka 15aad ee xeerka Nato qodobkaasi oo dhigaya weerarka lagu qaado dal ka mid ah Nato inuu la mid yahay weerar lagu qaaday xubnaha Nato oo dhan.
Golaha wadajirka ee Ruushka iyo Nato waxaa la sameeyey 2002, wuxuuna golahaasi uu Ruushka awood u siinayaa iney door la mid ah xubnaha Nato uu ku yeesho go'aannada siyaasadeed iyo arrimaha kale ee la xiriira khatarta dhinaca amniga.
Hase yeeshee, xiriirka Ruushka iyo Nato ayuu madmadow soo galay sanaddi 2004-tii marki ay Moscow ka biyadiidday isballaadhinta gaashaanbuurta ay ka waddo Yurub.
Nato waxay iyaduna sheegtay in Ruushka xubinnimada golaha la hakiyey xilligi uu dagaalka Ruushka iyo Georgia dhexmarayey ilaa uu Ruushka ciidamadiisa oo dhan uu kala baxo Georgia.
Balse xiriirka ayaa dib u soo noolaaday kaddib marki uu Barak Obama uu madaxweyne ka noqday 2009, gaashaanbuurtana ay bishi March 2009 ay ku dhawaaqday in dib uu u billowday xiriirka ay Ruush la lahaayeen.
Maxay yihiin caqabadaha ugu mudnaa ee soo food saaray?
Taariikhda Nato caqabadda ugu weyn ee la deristay waxay ahayd marki uu khilaaf dhex maray Jarmalka, Faransiiska iyo Mareykanka ayna isku khilaafeen dagaalki uu Mareyknaka Ciraaq ku qaaday 2003.
Xulafada Nato wax door ah kuma lahayn qabsashadi Mareykanka ee dalka Ciraaq, waddamada xubinka ka ahaana sida oo kale, marki dambana waxay ka qayb qaateen iney tababbarro siiyaan ciidmada Ciraaq.
Shir muhiim ahaa oo ay bishi November 2010 ku yeesheen Lisben waxay dajiyeen 'fikir cusub' taasoo ahayd iney xulafadu jaraan miisaaniyadda ciidamada ku baxdo ayna u wareejiyaan la dagaallanka dagaalka dhinaca teknooloojiyadda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tani iyo inta uu dalka Mareykanka madaxweye ka noqday wuxuu marar badan uu dhaleeceyn uu u soo jeediyey gaashaan buurta Nato.
Isaga oo eedihiisa ugu badanna u soo jeediyey dalalka Yurub ee xubinka ka ah Nato iney qaaraanka xulafada sidi la rabay u bixin, isaga oo weliba sheegay iney waddamada Yurub ee Nato ka tirsan ay isku halleyn dhaqaalaha Mareykanaka uu xulafada ku bixiyo oo ay qaybtooda bixiyaan.